Ragga Iyo Dumarku Isku Luuqad Kuma Hadlaan..!! - Daryeel Magazine
Ragga Iyo Dumarku Isku Luuqad Kuma Hadlaan..!!
Shabakada yoursexhealth.com ayaa waxa ay qortay baadhitaan lagu ogaaday in dumarka iyo raggu isku luqad ku hadal. Inkasta oo faraqa u dhexeeya uu ahayn mid asaas ah ayaa hadana luqada ay ku hadlayaan tahay ta sabab u noqota isfahmid laanta iyo isku dhaca.
Baadhitaankaasi waxa uu u natiijada ka dhigay mid guud, sida in guud ahaan dumarku ka hadlaan dareenkooda ayaga oo ku xoojianaya xiriirka ay qof la leeyihiin. Halka raguna ay qariyaan dareenkooda si ay u helaan awood iyo madaxbanaani. Taas oo la odhan karo dumarku waxa ay ka hadlaan arimaha quseeya xiriirka ama u dhexeeya ayaga iyo raga, halk raguna ay ka hadlaan waxa uu samaynayo.
Waxa muhiim ah in labada lamaane ee wada hadlayaa ama wax ka wada xaajoonayaa ay xasuustaan in hadii uu midi rabin in uu ka hadlo dareenkiisa uuna ahayn qof aan dareen lahayn. Iskuna dayaan in ay markasta xasuusnaataan arintaas. Hadii kale waxa dhici karta in mid kasta ka kale siinin fursad u si dheer uga hadlo waxa aad kawada xaajoonaysaan. Isku daya in aad markasta daacad ahaataan, sababtoo ah ma fududa in aad markasta fahanto marka uu lamaanahaagu hadalka kuu maldahayo ama sarbeebayo.
Dhibaatada Dawooyinka Dumarku Isku Cadeeyaan 3 Sababood Oo Dumarku Uga Hadal Badanyihiin Ragga Odhaahyo Xikmadeysan Oo Ku Saabsan Isfahamka Ragga & Dumarka Dawada Malabka Iyo Liin Dhanaanta La Isku-Daray